APAN Star Awards ပွဲမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုရရှိခဲ့သူများ (အပြည့်အစုံ) | News Bar Myanmar
APAN Star Awards ပွဲမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုရရှိခဲ့သူများ (အပြည့်အစုံ)
ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာတော့ 2020 အတွက် APAN Star Awards ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ APAN Awards ကတော့ APAN Star Awards နဲ့ APAN Music Awards ဆိုပီး ကျင်းပမှာပါ။ နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ခဲ့တဲ့ ဒီ ဆုပေးပွဲဟာ COVID-19 ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် 2020 APAN Star Awards ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး 2020 APAN Music Awards ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2020 APAN Star Awards ရဲ့ Grand Prize ကိုတော့ “Crash Landing On You” နဲ့ ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းယူခဲ့တဲ့ Hyun Bin မှ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 2020 APAN Star Awards ရဲ့ ဆုရရှိသူ အပြည့်အစုံ စာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Daesang (Grand Prize): Hyun Bin (“Crash Landing on You”)
2. Drama of the Year: “Itaewon Class”
3. Top Excellence Award, Actor inaMiniseries: Kang Ha Neul (“When the Camellia Blooms”)
4. Top Excellence Award, Actress inaMiniseries: Kim Hee Sun (“Alice”)
5. Top Excellence Award, Actor inaSerial Drama: Lee Sang Yeob (“Once Again”)
6. Top Excellence Award, Actress inaSerial Drama: Lee Min Jung (“Once Again”)
7. Excellence Award, Actor inaMiniseries: Park Hae Joon (“The World of the Married”)
8. Excellence Award, Actress inaMiniseries: Seo Ye Ji (“It’s Okay to Not Be Okay”)
9. Excellence Award, Actor inaSerial Drama: Lee Sang Yi (“Once Again”)
10. Excellence Award, Actress inaSerial Drama: Shim Yi Young (“My Wonderful Life”)
11. Best New Actor: Lee Do Hyun (“18 Again”), Jang Dong Yoon (“Tale of Nokdu”)
12. Best New Actress: Jeon Mi Do (“Hospital Playlist”)
13. Best Supporting Actor: Oh Jung Se (“It’s Okay to Not Be Okay,” “Stove League”), Kim Young Min (“The World of the Married,” “Crash Landing on You”)
14. Best Supporting Actress: Kim Sun Young (“Crash Landing on You,” “Backstreet Rookie”)
15. Best Writer: Lee Shin Hwa (“Stove League”)
16. Best Director: Cha Young Hoon (“When the Camellia Blooms”)
17. Best Manager: Kang Geon Taek (VAST Entertainment)
18. Web Drama Award: “Best Mistake”
19. Short-Form Drama Award: “Live Like That” (KBS 2TV)
Popularity awards ကိုတော့ ကြိုတင်ကြေညာခဲ့တာပါ။ “It’s Okay to Not Be Okay,” မှ Seo Ye Ji နဲ့ Kim Soo Hyun, “Itaewon Class” ရဲ့ OST တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “Sweet Night” ရဲ့ အဆိုရှင် BTS ရဲ့ V တို့မှ Popularity awards ကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး၊ KT Seezn Star Award ကိုတော့ Son Ye Jin တို့က ထိုက်ထိုက် တန်တန် ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။
2020 APAN Star Awards ရဲ့ ဆုရှင်တွေအားလုံး၊ CONGRATULATIONS ပါ။
Photo: 2020 APAN Star Awards
Next အမွှေစိန်လေး BamBam ကတော့ JB ကို Twitter မှာ ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားမွှေခဲ့ပြန်သလဲဆိုတော့.. »
Previous « ကောလဟာကသတင်းကနေ လှလှပပလေးရှောင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Zhang Yixing